Olona 3 tapitrisa tonga nandatsa-bato, resin’i Hong Kong ny isa ambony indrindra tamin’ny fandraisana anjara hatrizay · Global Voices teny Malagasy
Fomba milamina enti-mivoaka ny krizy pôlitika ve ity?
Voadika ny 01 Desambra 2019 3:56 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Nederlands, Español, Ελληνικά, Français, Italiano, English
Mpifidy milahatra eo ivelan'ny birao fifidianana. Sary avy amin'ny Stand News, nahazoana alàlana.
3 tapitrisa teo ny olona nivoaka handeha hifidy nandritra ireo fifidianana izay ho filankevitry ny distrika tamin'ny Alahady 24 Novambra 2019. Ny salam-pandraisana anjara tamin'ny 9:30 alina, ora ao an-toerana, dia efa nihoatra ny 69 isanjato, miaraka amin'ny isam-batompifidianana 2.853.608. Araka ny vinavina hatramin'ny 10:30 alina, fotoana nikatonan'ny birao fifidianana, mbola hiampy hiakatra 2 na 3 isanjato io salanisa io. Ny vokatry ny fifidianana dia mampiseho ny taham-pandraisana anjara tamin'ireo fifidianana rehetra nanerana an'i Hong Kong manontolo. Raha atao ny fampitahàna, ny taham-pandraisana anjara tao amin'io distrika io ihany tamin'ny 2015 dia 47 isanjato.
Mino ny ankolafy mpomba ny demaokrasia fa arakaraka ny maha-avo ny tahan'ny fandraisana anjara, no hahatsara kokoa ny vintana mety hahazoan-dry zareo ny maro an'isa amin'ireo seza 452 ao amin'ny filankevitra ao an-toerana. Nametraka ny taham-pandraisana anjara 70 isanjato ho toy ny haavon'ny vina mety hahazoan'ny ankolafy mpandàla ny demaokrasia ny ankamaroan'ny seza ny olona iray mpandalina ny fifidianana, nampiasa ny angondrakitra lehibe.
Ny tarehimarika momba ny fandraisana anjara dia raisina ho tondro goavana maneho ny hevitr'ireo olompirenena manoloana ny krizy pôlitika misy amin'izao fotoana natosik'ireo hetsika fanoherana ny fampodiana ireo olona nahavita heloka bevava, hetsika izay naka endrika faobe tamin'ny Jolay 2019. Vonona ankehitriny ry zareo ao Hong Kong hilaza izay safidiny amin'ireo mpomba ny andrimpanjakana sy an'i Beijing etsy andaniny, ary ireo mpifaninana mpandàla ny demaokrasia etsy ankilany.
Raha mahavita mibata ny ampahany betsaka amin'ny taotalimben'ireo seza 452 ho an'ny filankevitra ao an-toerana ny ankolafy mpandàla ny demaokrasia, dia mety hahazo seza 117 amboniny ao amin'ny kaomity misahana ny fifidianana lehibe mpanatanteraka ry zareo ka hahazo vato kely amboniny indray ho an'ireo fanovàna ara-politika amin'ny hoavy. Voalohany izao tao anatin'ny tantara no nanetsehan'ny ankolafy mpandàla ny demaokrasia mpifaninana 480 mihazakazaka ho an'ireo seza 452 rehetra.
Fifidianana ‘tsy nampoizina’ indrindra tao Hong Kong
Io voka-pifidianana io no vokatra ‘tsy ampoizina’ indrindra tato anatin'ny taona vitsivitsy lasa. Voalohany, nahazo tsiny ho manohana an-jambany ilay volavolandalàna fampodiana olona nahavita heloka bevava io andrimpanjakana io. Faharoa, maro an'isa ireo teratany ao Hong Kong mihasorena hatrany amin'ny fanimbàna sy ny korontana mifandray amin'ireo hetsika fanoherana ny governemanta. Ankoatra izay, anatin'ny ankolafy mpandàla ny demaokrasia, nihalalina ny fisarahana misy eo amin'ireo mpanohitra radikaly sy ireo milamina, satria tsy resy lahatra amin'ny demaokrasia misy solombavambahoaka ny vondrona teo aloha.
Ankatoky ny andro fifidianana, niantso ny hanatsaharana ny hetsipanoherana ireo mpandàla ny demaokrasia mpampiasa aterineto tao amin'ny media sosialy, isan'izany ny mifandanja amin'ny Reddit sy ny LIGHK ao an-toerana. Vokany, nizotra am-pilaminana ny fifidianana tamin'ny Alahady.
Mandra-piandrin'ny rehetra anaty tebiteby ny voka-pifidianana tsy ampoizina indrindra, ity misy fanazavàna haingana ny rafi-pifidianana ao amin'ny distrika sy ireo fifaneraserana ara-pôlitika nandray anjara tanatin'izany.
Rafi-pifidianana ny filankevitry ny distrikan'i Hong Kong sy ny fikirakiràna ny fifidianana
Manana filankevitry ny distrika miisa 18 i Hong Kong, izay manolo-tsaina ny governemanta amin'ny fampivoarana ireo fotodrafitrasa sy tolotra ho an'ny vondrompiarahamonina.
Tamin'ity 2019 ity, ahitàna mpikambana voafidy miisa 452 sy mpikambana avy hatrany (ex-officio) miisa 27 ireo mpandrafitra ny filankevitry ny distrika, izay miasa ho mpitondratenin'ireo kaomity any ambanivohitra. Mampiasa ny “seza iray, rafitra vato tokana” io filankevitra io ary ny Vaomiera misahana ny Fifidianana (EAC) miankina amin'ny fanjakana no tompon'andraikitra amin'ny famaritana ny faritanin'ireo seza 452 tsirairay avy.
Koa satria mety ho kely ny distrika, eo amin'ny mpifidy 10.000 eo, mety misy fiantraikany any amin'ny voka-pifidianana ny fahasamihafàna kely eo amin'ny fametrahana ireo velaran-tany mamaritra ny distrika. Raha ny marina, nanameloka ny EAC ho nanamboamboatra ireo faritra mametra ny distrika tanatin'ny fifidianana tamin'ity taona ity ireo mpandàla ny demaokrasia.
Manome vahana an'ireo antoko pôlitika mpiketrika sy mpomba ny andrimpanjakana ihany koa io rafi-pifidianana io, satria afaka manohana mpirotsaka ho fidiana an-jatony hanao fampielezankevitra any amin'ireo distrika kely rehetra izy ireo. Ohatra, nahavita naka distrika 68 tsy nahitàna mpifanandrina ny mpomba ny andrimpanjakana tamin'ny 2015, ny antony dia tsotra, satria tsy ampy enti-manana hifaninanana ho an'ireo distrika 431 rehetra ny mpomba ny antoko demokratika.
Vokany, mahazo ampahany betsaka amin'ny seza foana ny mpomba ny andrimpanjakana anatin'ny fifidianana isaky ny distrika. Tamin'ny 2015, tanatin'ireo seza 431 ho an'ny filankevitry ny distrika tamin'izany, nahazo 299 (teo amin'ny 70 % teo) ny mpomba ny andrimpanjakana, raha seza 125 fotsiny kosa no mba azon'ny mpandàla ny demaokrasia. Na tamin'ny 2003 aza, taorian'ireo hetsipanoherana an-tapitrisany nentina nanoherana ny lalàna momba ny fiarovam-pirenena, seza 151 tamin'ireo 400 fotsiny ihany no azon'ny demaokraty, satria enti-manana entina manohana olona 226 ihany no mba nananan-dry zareo.
Koa satria nanjaka tokana tao amin'ireo filankevitry ny distrika ny ankolafy mpomba ny andrimpanjakana tanatin'ny roapolo taona, namolavola tambajotra ifotony tsara orina izy, indrindra anivon'ny vahoaka mpisotro ronono amin'ny alalan'ireo tolotra ho an'ny vondrompiarahamonina sy ireo fanomezana maimaimpoana. Tamin'ny 2018, tanatin'ireo mpifidy voasoratra anarana miisa 3,81 tapitrisa, teo amin'ny ampahatelony teo — olona 1,23 tapitrisa — no maherin'ny 60 taona, raha latsaky ny 630.000 monja ny isan'ireo mpifidy 18 ka hatramin'ny 30 taona.
Project Storm: Mikatsaka fomba milamina hivoahana ny krizy pôlitika
Anatin'ity toejavatra ity, nahita hetsika hanovàna ny fizotran'ny fifidianana ao an-toerana ny ankolafy mpandàla ny demaokrasia. Nanolotra hetsika vaovao antsoina hoe Project Storm i Benny Tai, mpiara-namorina ny hetsika Occupy Central (Bodoy ny Foibe), tamin'ny 2017. Ny hevitr'ilay hetsipanentanana ara-pôlitika dia ny hibatàna ampahany betsaka amin'ny seza anatin'ny fifidianana ny filankevitry ny distrika mba hahazoan'ny demaokraty seza 117 fanampiny anivon'ireo seza 1.200 mandrafitra ny Kaomy misahana ny fifidianana. Mino izy fa hitarika tsindry ara-pôlitika sy hanery an'i Beijing hampiditra indray ireo fanovàna ara-pôlitika tsy tery loatra ny vokatra toa izany.
Tamin'ny fifidianana lehibe mpanatanteraka tamin'ny 2017, teo amin'ny vato 300 amin'ireo 1.200 anatin'ny kaomity misahana ny fifidianana no nofehezin'ireo mpandàla ny demaokrasia. Ny kaomity misahana ny fifidianana lehibe mpanatanteraka dia ahitàna ireo solontenam-panjakana avy amin'ny sehatra samihafa, isan'izany ny varotra sy ny toekarena, ireo vondrona matihanina, ireo vondrona ara-pinoana, ary ireo mpanao politika avy amin'ireo mpanao lalàna sy ny filankevitry ny distrika.
Na dia tsy resy lahatra amin'ny pôlitika ahitàna solombavambahoaka aza ireo vondrona sasany mpandàla ny demaokrasia, maniry ny hanandrana ny demaokrasia ifotony no miakatra ry zareo amin'ny alàlan'ireo filankevitry ny distrika. Vokatr'izany, voalohany izao tanatin'ny tantaran'ny fifidianana isaky ny distrika no hifaninanan'ireo mpandàla ny demaokrasia mpirotsaka ho fidiana anatin'ireo faritry ny distrika 452.
Na dia tsy manome rirany ny ankolafy mpomba ny demaokrasia aza ny rafi-pifidianana, mbola misy ny fanantenana ho amin'ny fiovàna.
Eny tokoa, raha toa ka miantehitra amin'ny “vato azo antoka” avy amin'ireo mpanohana fatratra azy ny ankolafy mpomba ny andrimpanjakana, ireo mpifidy miovaova kosa azo antenaina fa hifidy ho an'ireo mpifaninana mpandàla ny demaokrasia. Ankoatra izay, maniry ny hahita mpanao politika mpandàla ny demaokrasia hitazona ny toeran'ny mpitarika ireo mpifidy manana fomba fijery malalaka, mba hifehezana ny herin'ireo hetsipanoherana ho tonga hetsika pôlitika maharitra sy milamina kokoa.
Farany kanefa tsy ny kely indrindra, lasa mavitrika kokoa ny vahoaka tanora amin'ny fandraisana anjara anatin'ny pôlitika. Anivon'ireo mpifidy vaovao 380.000 voasoratra anarana tamin'ny 2019, teo amin'ny 48 % teo no 18 ka hatramin'ny 35 taona.
Hambara ny 24 Novambra 2019 ny voka-pifidianana. Manantena ny mpandàla ny demaokrasia fa hibata ny maro an'isa amin'ireo seza ary hanampy hikaroka fomba milamina enti-mivoaka ny krizy pôlitika misy amin'izao. Aza miala raha te hahazo fandalinana bebe kokoa mikasika ny voka-pifidianana.